Qarax ay ku halaagsameen Ciidan katirsan Riddada oo Galabta ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho (Faah Faahin). | Halganka Online
Qarax ay ku halaagsameen Ciidan katirsan Riddada oo Galabta ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho (Faah Faahin).
Maleeshiyaad katirsan Kooxda Riddada ee uu hogaamiyo shariif Murtad ayaa galabta ku halaagsantay qarax Barakaysan oo ay xoogaga Mujaahidiinta kula eegteen degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa mid loo adeegsaday Miino dhulka lagu aasay waxaa ku Bakhtiyay inta la ogyahay 7 katirsan Ciidanka Riddada oo waxyaabo Fisqi ah ku samanayay goobta lagu qarxiyay.
Dad ku sugan Waaberi ayaa Idaacadda islaamiga Andalus u xaqiijiyay in ay arkeen Bakhtiga Murtadiinta iyo dhaawacyo soo gaaray tiro kale oo katirsan Kooxdaasi, Maleeshiyaadkan galabta lagu laayay qarxaa barakaysan waxay ilaala u ahaayeen Horjooge katirsan Murtadiinta oo lagu magacaabo Cabdi Madoobe.
Qaraxan Barakaysan ee lagu laayay Maleeshiyada Riddada ayaa kusoo aadaya xilli shacabka Muslimiinta ah ee Waaberi ku nool ay habeenadii lasoo dhaafay dhibaato kala kulmayeen Murtadiinta waxaana ugu dambaysay dhibaato ay xalay kula keceen dad shacab ah.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay qaraxyo iyo Weeraro Barakaysan oo ay Mujaahidiintu ku ugaarsanayaan Murtadiinta iyo Gaalada kale ee ku sugan magaalada qaybo kamid ah.
« [Sir Culus oo la helay] iyo Caddeyn ku socoto Umadda Somaliyeed:Qubuura Galeenka oo ay ku cadaatay dabadhilifnimada Tigreega iyo Isbaheysigoodii oo burburay(Hoos ka akhriso Qoraalka Sirta ah). War deg deg ah: Ciidamada Mujaahidiinta oo lawareegay gacan ku dhaynta degmada Ceel-barde gobalka Bakool. »